FBC - Mootummaan naannichaa nagaa fi araara ni jajjabeessa, kan balleessaa uume garuu itti gaafatamuu qaba -obbo Lammaa Magarsaa
Mootummaan naannichaa nagaa fi araara ni jajjabeessa, kan balleessaa uume garuu itti gaafatamuu qaba -obbo Lammaa Magarsaa
Finfinnee, Sadaasa 5,2010(FBC)-Mootummaan naannoo Oromiyaa nagaa fi araara ni jajjabeessa, kan balleessaa uume garuu itti gaafatamuu qaba jedhan preezdaantin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan.
Walitti bu’iinsa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti uumameef sadarkaa biyyaatti kora araaraa qopheessuuf koreen araaraa hundaa’e preezdaant Lammaa Magarsaa waliin kaleessa mari’ateera.
Dursaan koree kanaa Injinar Geetaahuun Huseen wal dhibdeen naannolee lameen gidduutti uumame seenaa keenya keessatti waan takkaa umamee hin beknedha jedhani, kaayyon koree isaaniis nagaa buusuu, warri qa’ee isaanii irraa buqqa’an gara iddoo isaaniitti akka deebi’aniif haala mijjeessudha.
Rakkoon akkanaa kun lammata akka hin dhalannes fala kaa’uudha jedhan.
Koreen isaanii naannoo Somaaleetti kora araaraa midhamtoonni, manguddoonnii fi abbootin amantaa irratti hirmaatan qopheessuf mootummaa naannoo Somaalee waliin akka marii’atee fi kora kana Oromiyaa fi sadarkaa biyyaatti magaalaa Adaamaatti qopheessuf fedhii akka qabu ibsaniiru.
Miseensonni koree kanaa ummanni Oromoo fi Somaalee obbolaawwan waan ta’aniif hoggantoonnis araaraaf haala mijeessuu akka qaban dubbataniiru.
Hojiin preezdaantii Afrikaa Kibbaa Niilsan Maandeellaa fi preezdaantiin Gibts Anuuwaar Saadaat ummata gidduutti uumuf hojjetan yaadachiisanii, akkuma obbolummaa ummata Amaaraa fi Oromoo cimsuuf socha’an, jila tokko qabatanii gara naannoo Somaalee deemun nagaa akka buusan gaafataniiru.
Kana kan godhan taanaan waaggaa 100f nagaa buusuun, goota ilma Oromoo qofa osoo hin ta’in, goota Kuush jedhamtu jedhan.
Koree araaraaf qophaa’e kana kan mariisisan Preezdaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan mootummaan naannichaa nagaa buusuuf akkasumas qaama nagaa barbaadu kammiinu waliin hojjachuuf qophii ta’u ibsan.
Garuu walitti bu’iinsi kun kan ummataa osoo hin taane warra faayidaan dhuunfaan isaanii jalaa tuqamee fi faayidaa mataa isaanii guttachuuf daba hojjataniin kan uumamedha jedhan.
Rakkoo kana kan uume garaagarummaa ilaalchaa miti, aangoo barbaachaas miti, saamicha malee kan jedhan obbo Lammaan, jimaan alatti ergamurraa guyyaatti Doolaara miiliyoona tokkoo olitu argama jedhan.
Kun immoo harka qonnaan bulaa keenya kan galuu miti, daldala koontiroobaandiitu jira, ji’a tokkotti sakkata’iinsa tasaa taasifameen Doolaara seeraan aala socha’aa ture baayyeetu too’atame.
Biyyattiin immoo hanqina sharafa Doolaaraa qabdi; kanaafuu rakkoon kun kan uummataatii miti jedhaniiru.
Hoggantoota mootummaa caalaa maanguddoonni hariiroo ummataa cimsuu irratti hojjachu akka qaban kan dubbatan obbo Lammaan, hoggantoonnis dirqama irraa eegamu kan bahatan akka ta’e ibsuu isaanii OPDO - Official irraa odeeffanneerra.
Hoggansi faayidaa fi fedhii ofii guuttachuuf walitti bu’iinsa saboota lamaaniitti fayyadamee itti gaafatamuu qaba jedhan Preezdaant Lammaan.
Oduuwwan Biroo « Komii kaffaltii beenyaarratti ka’u furuuf wixineen labsii qophaa’e	Muummeen ministiraa lammiilee Kuwaataar jiraatan mariisisan »